Shina : Fitokonan’ny mpamily fiarakaretsaka, sendikà ary demaokrasia an-dalambe · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 03 Desambra 2008 9:18 GMT
Tahaka ny hoe nisy fitokonan’ny mpamily fiarakaretsaka ny 1 Desambra teo tany Guangzhou (efa fotoana lasa manko ka izay no nanaovako azy ho fotoana lasa ihany koa), ary efa nisy ny taratasy fanentanana ho amin’izany nandehandeha. Nandika azy ho azo vakiana anaty solosaina i Beifeng ka nametraka azy tao amin’ny bolongany; naka dika avy amin’izany i Chong ka nametraka azy tao amin’ny inmediahk.net :
Tamin’ny 23 Novambra, dia nisy fifandonan’ny fiarakaretsaka iray tamina fiaran’olo-tsotra iray, izay nitarika fibahanan’ny fiarakaretsaka anjatony ny lalana lehibe rehetra. Nifampitohy tamin’ny fitokonan’ny mpanamory fiarakaretsaka rehetra nanerana ny firenena io toa-javatra io. Soritsoritan’i Xin Lijian ho antsika ny fizotran’ny fitokonana nandritra ny volana Novambra:
Mba ahafahana mamaha ireo olana rehetra ireo dia nandroso sosokevitra ny mpamily fiarakaretsaka hanangana Sendikà iray ny vondron’ny sendikà rehetra manerana an’i Shina Manontolo hifampiraharaha amin’ny orinasan’ny piklà. Na izany aza dia nomarihin’i vahinin’i lakeside fa ny sendikà mahomby dia tsy maintsy tantanin’izay nofidian’ny mpamily fiarakaretsaka mivantana, fa raha tsy izany dia tsy hivaha ny olana:
Endrika fanao demaokratika tokoa ny fifampiraharahana iraisana, nefa, nofantenan’i Beifeng ny gazety iray avy any Singapaoro milaza fa tokony ekena koa ny endrika demaokrasia an-dalambe ataon’ny mpanamory fiarakaretsaka: